Halkee Ayuu Salka Ku Hayaa Khilaafka Cakiran Ee udhexeeya Gudomiyaha Asli Maydi Iyo Cheif Caaqil Faysal Abokor by Cabdiraxmaan Ismail.
Friday September 28, 2018 - 19:51:42 in Wararka by Shaqaalaha Burcoonline News
Bulshada Gobolka Sanaag saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay waxay soo mareen duruufo adag oo mid waliba weji gaara ku qaabishay sida:-
FAALLO :-(Burcoonline) 18.09.2018 Bulshada Gobolka Sanaag saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay waxay soo mareen duruufo adag oo mid waliba weji gaara ku qaabishay sida:-
Abaaro ,Colaado iyo Doorasho.
Mawduuc walba markaad sidiisa ugu sifeyso saameynta iyo raadka uu kaga tagay waa arin ay ogaalkeed Mid jooga Miyi , Magaalo ilaa wadamada dibadu ay ka dheregsan yihiin .
Balse Waa Bani’aadam oo Nimcada iyo Dhibtaba marku waayo ka joogoba wuu ilaa-baa .
Gobolka Sanaag Wakhtigii Abaarta ugu darani ka jirtey ee iskaba daa Xooluhu inay Calaf la’aan) Baad la’aan iyo Biyo la’aan ay u le’daane, Tiiyoo dadkuna meelaha qaarkood Haraad iyo Gaajo iilka ugaleen , halka wakhtigaas qaarkoodna la il-darnaayeen Diifta ,Diihaalka iyo Dayro-dhaafka dhaxameed .
Dal iyo Dibad gurmad kuma yarayn , Dalka gudihiisa waatay Ganacsatadu shilinka ufureen .
Gobolka Sanaag oo ah Dhul daaqsimeed baaxad Alle Ku galaday isla markaasina ahaa Gobolka Xoolaha ugu uga iman jireen gobolada kale ee dalka gudihiisa iyo inta dibada loo waaridoba.
SANAAG ; Ganacsatadii Sida hagar la’aanta ah hantidooda ugu hibeeyay waxa kow kahaa Ganacsade Barkhad Jibriil Xassan oo iminka ah ninka Somalida ugu taajirsan , isla markaasina ah Gudoomiyaha Shirkada [ Asli Maydi ] .
Inaan libintiisa qiraana waa ta igu keliftay Hadal qoraalkaygan .
Barkhad wuxu waajibkii gurmad ku fuliyay ama ka hor bilaabay deegaanada uu ka socdo ganacsigiisa beeyada .
Deegaanadaas waxan qoraalkaygan kusoo qaadanayaa Magaalo Ganacsiyeedka [Ceel-Dahab /Dibir].
Iyadoo ay sidaa tahay waxa deegaankaasi yimi Barkhad Jibriil kadibna wuxu calaa kiilo dadkii deegaanka ka siistay $5 .
Isla markii uu hawsha si dardar leh ku bilaabay ganacsatadii yaryarayd ee beeyadana macaash badan usoo hooyay , arintaa dadweynihii deegaanku aad bay ugu riyaaqeen halka geesta kalena ay aad ugasoo hor-jeesteen Ganacsatadii Gacanta koowaad , Madax-dhaqameed deegaanka ah iyo niman Siyaasiyiin sheegta oo isla deegaankaasi kasoo jeeda.
Kadib dedaalkaas iyo juhdigaas ayuu Afartii Sano ee Lasoo Dhaafayba Ka Waday Deegaanka uu ka ganacsanayay ee Ceel-dibir,
Inta badan sida Caado dhaqameedka Beeyada iyo hawleheeda ka dhex jirta amba dadka intiisa udhuun dalooshaa utaqaano , Hawshu waxay ku bilaabantaa Maal-gelinta Gacanta Koowaad ka imanaysa oo ah Shirkada keliya ee ilaa haatan la ogyahay inay Beeyada si nadiifa uga ganacsato ee Gobolka sanaag waa [Asli Maydi’e].
Hadaba Qofku marku hiigsi iyo himilo fog leeyahay ma waayo mid ka xun oo qardoofo hadba u dhiga e .
Ninkaa halkii kiiloo graam ee beeyada ah kasoo Qaaday $1 ee isagu kaga iibsaday dadkii deegaanka $5 .
Waxa mas laba iyo luqun madoobe ah ku noqday Ninmankii umadaa deegaankaas inay kamasuul yihiin lagu sheegay , oo waxba kalama gabanayo e uu ugu horeeyo Inaadeerkay Faysal Abokor Xassan oo ah Caaqil deegaanka Shirkada Asli Maydi Ka Ganacsato Kasoo jeeda .
Waxa nasiib daro weyn ah kadib markii Ninkaa Faysal arkay in deegaankii lacag badani soo gashay oo ganacsatadii yar-yarayd dhaqaalohoodii kobcay inu qaado talaabo kasta oo uu deegaanka kaga saaro shirkadaasi faa’iidada weyn bulshadii deegaankiisa usoo kordhisay.
Deegaanada Kale ee Somaliland waxan ku arkay Haday tahay Hogaan Siyaasadeed iyo Mid dhaqanba waxay Aalaaba ku mashquulsan yihiin sidii bulshadooda horumar Tanaada ugaadhsiin lahaayen .
Balse bi’i waaye walaalkey FAYSAL Wuxu noqday Beryahaaba Boog ku taala bulshada Deegaanka Huluul iyo Inta ay xukunto .
Bulshadiina deegaankuna maadaama oo ay arkeen si fiicanna uga dhergeen habdhaqankiisa waxay Su’aal geliyeen mas’uuliyada uu u hayo .
Qalinkii :-Suxufi Cabdiraxmaan Ismaaciil (Saylici).